UDkt Matthew Burnett uthole indondo i-Opportunity for Learning and Advancement in Fisheries (i-OLAF).
Uhlabane Ngendondo I-International Fisheries Award Ongumcwaningi Wase-UKZN
UDkt Matthew Burnett, ongumcwaningi e-Centre for Functional Biodiversity (e-CFB) yase-UKZN nongusosayensi omkhulu e-Rivers of Life Aquatic Health Services, inhlangano yocwaningo, uhlabane ngendondo i-Opportunity for Learning and Advancement in Fisheries (OLAF) Award, eklonyeliswa yi-American Fisheries Society (i-AFS).
Le ndondo, eyingxenye yezindondo zobulungu baphesheya nabomdabu ze-AFS International Fisheries Section, ilekelela amalungu amazwe asathuthuka nabantu bomdabu ukuthi bahlangane nabalingani babo kwi-AFS, bafinyelele ezingqungqutheleni namathuba okwabelana ngolwazi ukuze bakhulise igama labo nocwaningo lwabo.
Le nhlangano enamalungu ayizi-8 000 emhlabeni jikelele asemikhakheni ehlukahlukene, phakathi kwezinhlelo zayo wukushicelela amajenali ocwaningo amahlanu, ukwenza imihlangano yezesayensi nezinhlelo zokuthuthukisa ucwaningo lwesayensi nokwengamela izinto zokudoba.
Indondo i-OLAF yaqanjwa ngoDkt Olaf Weyl ongasekho, owayehlonishwe ngokuba ngumcwaningi e-UKZN nowayenguSosayensi oMkhulu noSihlalo woCwaningo e-Inland Fisheries and Freshwater Ecology e-South African Institute for Aquatic Biodiversity. Umsebenzi ka-Weyl wawugxile ekuvikeleni nokwenziwa yizinhlanzi ezingezona ezomdabu emanzini kwezinye izinhlanzi nokubheka izinto ezithinta izinga lezindawo zokudoba.
U-Weyl waba namagalelo azwakalayo ezindaweni zokudoba e-Afrika yonkana, kanti le ndondo iqhubeka nalo msebenzi ngokuthi kuthanyukwe namasu amasha ezindaweni zokudoba eNyakatho Melika angakwazi ukudluliselwa emazweni asathuthuka.
U-Burnett, owaphothula iziqu zobudokotela e-UKZN ngowama-2019 enza umsebenzi wokuthuthukisa ngokubambisana i-Southern African Inland Fish Tracking Programme (i-FISHTRAC), waqokwa eningini labantu ababefake izicelo ukuthi athole i-OLAF Award.
Uhlelo i-FISHTRAC lusebenzisa indlela izinhlanzi ezenza ngayo ngaso leso sikhathi ukubona izinga lamanzi bese idlulisela le mininingwane kwizimenenja zokonga imvelo nokudoba.
U-Burnett useshicilele amaphepha amaningi ocwaningo esebenzisa amasu ethelemethri yezinhlanzi ukwandisa ulwazi ekuziphatheni kwezinhlobo zezinhlanzi zaseNingizimu Afrika ezinjenge-yellowfish ne-tigerfish. Kulokhu kukhona ukubuyeza iphepha lamasu ethelemethri yezinhlanzi emanzini ase-Afrika neqhaza lawo ekuphatheni izinto zamanzi.
‘Ukuqonda imvelo yamanzi ahlanzekile kunika umongo obalulekile ekuhlinzekeni ngamanzi kubantu baseNingizimu Afrika nokuzibophezela kwezwe kwi-Sustainable Development Goals (ama-SDGs),’ kusho u-Burnett.
Odabeni lwama-SDGs, usebenzisa ithelemethri yezinhlanzi ukubheka ukusebenza kahle kwezithiyo ezisemanzini ezisezindaweni zokubeka amanzi, ezinjengamadamu, empilweni yezinhlanzi.
‘Ukuxhumana emfuleni sekuphenduke into ebalulekile ekwakheni izindawo zokugcina amanzi - idinga ukuhlolisiswa ukuvikela nokuthuthukisa izindawo zezinhlanzi zase-Afrika ukuze sifeze ama-SDGs,’ kusho yena.
U-Burnett uhlose ukuqonda indlela yokunciphisa nokulawula izingcindezi ezisemanzini ahlanzekile ezifaka ukungcolisa amanzi, ukumunca amanzi nokuhlukanisa kanye nokuguqula izindawo ezisemanzini. Ucwaningo lwakhe lwalugxile ekuhlengeni izinhlanzi emva kokufa kweziningi, ukuhlola amaqoqo ezinhlanzi ekusetshenzisweni ezintweni ezahlukene nokuqonda indlela yokuphila nemvelo yezinhlanzi zomdabu.
U-Burnett, ophethe igatsha i-Rivers of Life KwaZulu-Natal, ukhulisa umkhakha wocwaningo lwakhe e-CFB yase-UKZN, kumanje weluleka izitshudeni eziningi ezifunda amakhono emkhakheni amqoka ngemithombo yamanzi ngokwenza ucwaningo.
Amathombe: wu-Christine Cuénod
Isifundiswa Sezomculo Sase-UKZN Sigixatshezwe Ngezinga Eliphezulu Yi-NRF
Imihlomulo Kwizitshudeni Ezizinikele
I-UKZN Ibine-Artfluence Human Rights Festival Lapho Okwaboshelwa Khona UMandela
Ochwepheshe Bezempilo Base-UKZN Bakhuthazwa Ukujoyina I-Global Outreach Movement